Akụkụ ahụ ezughị ezu, injin na-arụ ọrụ metụtara agụmakwụkwọ ndị metụtara akụ na ụba Africa. - Afrikhepri Foundation
Ahịa adịghị mma
Mpaghara oru ahu, ndi mmadu na-achota mmepe mmepe na-agbanye aka na aku na uba Afrika.
Pa Cedric Christian NGNAOUSSI ELONGUE
Na-agụ: 6 mins
Dmba ndị mepere emepe, ọ bụrụla omenala ịtụle ahịa ọrụ dị ka ebe nnweta na ihe a chọrọ. Agbanyeghị, na mpaghara Africa ebe ọrụ onwe onye na obere onye ọchụnta ego bụ ihe kacha ejikọ ọnụ na ahịa ọrụ, oke ókè dị n'etiti inye ndị ọrụ na ọchịchọ ga-abịa nke ọma.
Informality bụ norm na Africa.
Ụkpụrụ bụ ókè akpụ akpụ. Ụkpụrụ nwere n'ezie axiological akụkụ nke a ga-atụle ma kwanyere ùgwù. Ọ bụ otu ihe ahụ maka akụ na ụba nke Africa, nke na-eme nke ọma, n'ụzọ ụfọdụ na mpaghara ahụ. Na nyocha a, ọ bụghị ajụjụ nke ịrịọ mgbaghara maka ihe ọmụma kama nke ịkọwa ya dị ka ụzọ ọzọ maka mmepe na-agbanwe na Africa.
Nyocha 1: 6 nke akụ na ụba ngwa ngwa nke 10 dị n'Africa. @CI, 2018
Dị ka Fund Fund Monitors si kwuo (IMF), 6 10 kasị akụ na ụba na 2018 dị n'Africa. Etiopia na 8,3% ibu, dị na ndu ezi akụ na ụba, Ghana sokwa , dị ka amụma IMF. Mgbake akụ na ụba na-aga n'ihu na mpaghara Sub-Sahara Africa ebe ọ bụ mpaghara na-enweghị isi na-akpali ma na-agbanwe. Dị ka ọmụmụ ọzọ na-egosi site na French Development Agency (AFD):
“Ọtụtụ ọrụ na mba ndị ka na-emepe emepe (DCs) dị na akụ na ụba nkịtị [inform]. Ọbụna anyị nwere ike iche na ọgba aghara akụ na ụba ụwa na-eme ka ịdị arọ nke ngalaba na-enweghị isi na-ebuwanye ibu n'ihi ụgwọ ọrụ na-emetụta ngalaba ndị ọzọ nke ọrụ akụ na ụba. Nghọta ka mma banyere ọrụ nke akụ na ụba nke mba ndị a chọrọ ihe ọmụma ka mma banyere mpaghara na-adịghị mma. "
Ọ bụ ịkwalite mpaghara na-enweghị isi ga-aba uru karịa?
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na nke ụlọ ọrụ akụ na ụba na-ahọrọ ịhapụ nchịkwa obodo n'ihi na ọ ga-efu ha oke ime ihe iwu ahụ kwuru. N'ọtụtụ ọnọdụ, agba ha ume irube isi n'iwu ndị a agaghị eme ka arụmọrụ ka ukwuuọbụna ma ọ bụrụ na ha ga-enye aka na ego nke ngwongwo ọha ha na-erite uru. O di nkpa iburu eziokwu a n'uche na izere echiche nke ndi mmadu banyere ime ihe mgbe ị na-enyocha ahịa ahịa na mpaghara Sahara Africa.
Nyocha 2: Mmetụta nke ọrụ nkịtị site na mpaghara
Dika enwere ike ihu na onu ogugu a, ndi oru a na-achota oru karia oru oru Latin America, Asia na Afrika. Dị ka ihe atụ, n'Ijipt, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na mpaghara ahụ na-ezughị ezu dị ka nke ahụ na ngalaba na-emeghị ememe. ọha. Ọ bụ ihe nduzi na nsogbu nsogbu ọrụ. Na Senegal, Ọnụ ọgụgụ Ọgụgụ Ọnụ Ọgụgụ (RGE) nke ebipụtara na ngwụcha nke mbụ nke afọ 2017, n’ime ụfọdụ “ngalaba akụ na ụba” 407 a gụrụ, ihe karịrị ọkara na-arụ ọrụ ha na azụmaahịa. Agbanyeghị, "ihe karịrị 000% bụ naanị ndị nwere ikike na 96% nke ngalaba akụ na ụba edepụtara bụ nke na-ezighi ezi". Informality dị oke mkpa maka ọgụ a na-alụso ịda ogbenye.
« Ebe oru oru ugbo na-aga nke oma abughi ndi oru ahia»
underlines, na nke a, Martin Rama, Director akụkọ na mmepe na ụwa 2013, ya okwu mmalite ka akwụkwọ nke AFD na obodo mepere emepe oru ahịa na Sub-Saharan Africa.
N'ezie, imirikiti ọrụ akụ na ụba n'Africa bụ ihe na-ezighi ezi, ndị ọrụ gọọmentị na-esochi ya. Informality bụ norm. Nke a bụ isi okwu n'ihi na ileghara ndị na-arụ ọrụ n'ahịa anya na-egosipụta onwe ya n'ọgbaaghara mmekọrịta ọha na eze; dị ka “Arab Spring” nke 2011, nke malitere na Tunisia site na njide onwe onye nke onye na-ere ahia n’okporo ámá nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị uwe ojii megburu.
Nkuzi mmuta na emetuta nghazi maka ngalaba na enweghi ike?
Ihe omuma ihe abughi nani usoro ndu ma banyere nhọrọ ndi mmadu na ndi Afrika. E nwere nọmba ezigbo micro-entrepreneurs. Ya mere ọ ga-adọrọ mmasị ịma ma ọkwa agụmakwụkwọ, ya mere na-emetụta usoro a maka usoro akụ na ụba. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị ọrụ na ngalaba na-anọghị n'ịdị n'ebe ahụ ụma ma ọ bụ na ọ bụ nkwụsị, mgbazinye oge mgbe enweghị ụzọ ọpụpụ na mpaghara ọha na nke onwe?
Pierre Tegoum, ga-eleba anya n'okwu ahụ, dịka usoro nyocha nke Cameroon. Ọ na-egosi na agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọnọdụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na Cameroon. Ime ka ndi mmadu banye na ndi mmadu na-emekorita n'adighi ike. Tụkwasị na nke ahụ, ohere nke ịbanye na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ebelata na agụmakwụkwọ, ebe ọ bụ na enweghi ike ọrụ na ịbanye na mpaghara ụlọ ọrụ na-abawanye n'ọmụmụ ihe. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji melite ohere na ogo agụmakwụkwọ, ma ọ dịkarịa ala ruo na nke mbụ nke mmụta sekọndrị.
Ebumnuche anyị bụ igosi na ngalaba a na-ahụ maka mgbasa ozi bụ ngwa nke mmepe obodo na ntinye elu na Africa. Mmetụta ya nwere ike inye aka na mgbanwe ahụ na adigide nke Africa. Ndị na-eme mkpebi ga-eme ka ngalaba na-enweghị isi bụrụ ezigbo onye mmekọ na amụma mmepe na njikọta na Africa. Ebe ọ bụ na uto ugbu a ezughị, ọ bụ mgbanwe akụ na ụba na nke mmadụ na Africa chọrọ. Ọchịchị ọha na eze ga-adị mkpa iji kwalite mmepụta akụ na ụba, mee ka asọmpi ma nwee ike ịmepụta ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ala Africa.
 Dị ka ihe ncheta, IMF akọwagharịala usoro nke ọrụ na-adịghị mma. Maka ụlọ ọrụ ahụ, “okwu a gụnyere azụmaahịa ezinụlọ na-eweta uru ahịa n'ahịa na-edebanyeghị aha ya na n'ụzọ sara mbara karị, mmepụta ala nke sitere na ọrụ na-arụpụta ọrụ nke ọrụ azụmaahịa edenyere aha, mana enweghị ike ịgwa ndị ọchịchị iji zere iwu ma ọ bụ ụtụ isi, ma ọ bụ n'ihi na iwu akwadoghị. "
 IMF, "World Economic Outlook, Eprel 2018", IMF, banye na June 22, 2018, https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic- outlook-april-2018.
 Jean-Pierre Cling et al. Ọnọdụ akụ na ụba na mba ndị ka na-emepe emepe (AFD, 2012).
 DE VREYER Philippe na ROUBAUD François, eds., Ulo oru ahia ndi ozo di na Sahara Afrika, IRD / AFD, Africa Development Forum (Marseille: IRD Publishing, 2013)., P. 11.
 «Asambodo na Africa: usoro mgbanwe gafere na mmepe nke teknụzụ na nka ọrụ aka | ADEA ”, gbara ajụjụ ọnụ na June 20, 2018, http://www.adeanet.org/fr/blogs/la-qualification-en-afrique-changement-de-paradigme-vers-le-developpement-des-competences.
 Pierre Nguetse Tegoum, “2.2. Nkọwa nke ịlaghachi na agụmakwụkwọ na ngalaba na-enweghị ọrụ na Cameroon  ”, Ọnọdụ akụ na ụba na mba ndị ka na-emepe emepe, 2012, 1129.
 Issofou Njifen, "Ezighi ezi: ihe ngosi ọhụrụ nke mmepe na ntinye" site n'okpuru "n'Africa", Nyocha Africa Development 26, no S1 (s. D.): 21-32, https://doi.org/10.1111/1467-8268.12090.
Ọba akwukwo ohuru (PDF)
Gịnị bụ ntụgharị uche gabigara ókè?
Hapụ ụbụrụ gị - Idriss Aberkane (Audio)
Mantra - Akwụkwọ edemede (2019)
Cheikh Anta Diop, ndị Jectanides na Hyksos